रुपा-कृष्ण लागे समाज सेवामा: क्यान्सर पिडित धर्मलाई सहयोग गर्न गरे अनुरोध – Rapti Khabar
हेर्नुहोस कारुणिक भिडियो:
बिहेको दिनकै भोलीपल्ट कृष्णको २ हात र १ खुट्टा काटियो । अनि रुपालाई आफन्तले अर्कैसँग बिहे गरेर जा भने तर हात खुट्टा गुमाएका कृष्णलाई एक्लै छोडेर रुपा कतै जान सकिनन् । बरु कृष्णसंगै जिउने र मर्ने रुपाले कसम खाईन ।
त्यो कालो दिन ‘२०७५ जेठ २५’
कृष्णलाई भने कतै मेरो कारण उनको जिन्दगी त बर्बाद भइरहेको छैन भन्ने लाग्दो रहेछ । ‘मैले गर्दा तिम्रो जीवन बर्बाद भयो भन्ने गर्छु,’ कृष्णले भने, ‘उनी म जे गर्छु तिम्रो साथमा गर्छु छोडेर जा नभन्नु भन्छिन् ।’
रुपाको मन नपर्ने बानी ? ‘अलि छिटो रिसाउँछिन् ।’
कृष्णको मन नपर्ने बानी ? ‘के हुनु नि एक नम्बरको घमण्डी भेँडे ।’
कृष्णलाई रुपाले के गरेको मन पर्छ त ? ‘ऊ साह्रै राम्रो नाच्छे ।’
असोज २६, काठमाडौँ । धेरैजसो मानिसहरूका लागि कोरोना भाइरस खतरनाक रोग होइन तर केही मानिसहरूलाई यसबाट पूर्ण रूपमा निको हुन गाह्रो भइरहेको छ। उनीहरू महिनौंदेखि थकान, दुखाइ र सास लिन गाह्रो हुनेजस्ता समस्या जुधिरहेका छन्। यस परिस्थितिलाई ‘लङ कोभिड’ भनिन्छ। बिरामीमा यसको नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। यस्ता मानिसहरू थोरै मात्र हिँड्दा पनि थकित हुने गर्छन्। […]